Abantu abaningi bayazi ukuthi ungenza imali yentela izindlu uthenge noma owakhiwe. Kodwa, bambalwa abantu bazi ukuthi intela lungabuyiselwa futhi kwezinsizakalo zokwelashwa. Ukuze bentela kakhulu lokhu kungenzeka, futhi akwenzi mqondo, ngoba isilinganiso Umuntu ophilile kangako ukuthenga imithi. Kodwa abanye abantu, ababe ukwelashwa okubizayo noma ukuthenga imithi ebizayo, lemali imbuyiselo kuyoba eningi kakhulu.
yentela yemali engenayo ukubuya ukuze bayothola ukwelashwa
Buyela imali lezempilo izidakamizwa may zonke izakhamuzi, hhayi kuphela ngoba imithi yabo siqu, kodwa futhi ekwelapheni izingane ezisencane noma abazali. Kungenzeka futhi ukukhipha i-income tax izimbuyiselo ekwelapheni umngane womshado (unkosikazi). Ukudoswa intela kungenzeka ezimweni ezilandelayo:
- uma ziye zaphathwa semitholampilo we Russian Federation;
- uma uthola nemithi oyinikezwe udokotela (aphoyintimenti - imfuneko);
- uma bachithe imali kube isiphelo sesimiso DHS noma ukwelulwa kwenkontileka ohlinzekela izinkokhelo umshwalense;
- uma wake waba ukwelashwa okubizayo.
Kwezinye izimo, abakhokhi bentela kungenzeka bayenqaba ukukhokha. yentela yemali engenayo izimbuyiselo ukwelashwa akunakwenzeka kwalezi zimo:
- uma imali yokukhokha esibhedlela okuthile kwezihlobo eziseduze, ngaphandle kwabazali izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala;
- uma bachithe imali kube isiphelo sesimiso DHS noma ukwelulwa kwenkontileka, okuyinto alinikezi Imihlomulo yomshuwalense;
- uma ukwelashwa senzeka phesheya.
Ulwazi olubalulekile: Ukuze uthole imali ebanjwayo, kubalulekile ukuthi umtholampilo lapho babephathwa, noma inkampani yomshuwalense kwadingeka ilayisensi.
Inani nokudoswa ibalwa ngamunye. It incike ubukhulu yentela ngemali engenayo yakho futhi wachitha on ekwelapheni imali. Inkokhelo obuyisilinganiselo ruble ayizigidi 120.
Noma kunjalo, uqaphele ukuthi lokhu imali imali evamile esiphezulu kuwo wonke ezibanjwayo nomphakathi. Okusho ukuthi, uma uke bachitha imali ekwelashweni, futhi ngesikhathi ukuqeqeshwa esifanayo ikhokhwe, kungenzeka ukukhipha imali yentela bese, nokuningi. Kodwa inani zaziyoqhubeka ruble akukho kuka 120 ayizinkulungwane.
Nokho, kukhona ngaphandle nje kwento eyodwa. Uma ukhokha kusuka ohlwini ekhethekile kugunyazwe uhulumeni waseRussia, value abo izobuyiselwa ngokugcwele.
Ukwenza amaphepha entela ukuze ayokwelashwa, uzodinga lezi zincwadi ezilandelayo:
- simemezelo yonyaka (ifomu 3-PIT);
- isicelo sokubuyiselwa imali;
- isitatimende engenayo (ifomu 2-PIT);
- isivumelwano ne emtholampilo (ikhophi);
- isitifiketi yokukhokha (wokuqala);
- kadokotela ifomu, eqinisekisiwe ngumuntu isitembu ekhethekile "emagunyeni intela ye Russian Federation" (original);
- amasheke ukukhokhelwa kwemithi (amakhophi).
Futhi, uma uhlele imali yentela engenayo for ekwelapheni isihlobo esiseduze, uzodinga amakhophi amadokhumende eqinisekisa degree of nokuzwelana.
Ukuze uthole imali ukwelashwa kuyadingeka ukuze uthumele wonke amadokhumenti futhi izitifiketi yokuhlala intela.
Ulwazi olubalulekile: i sokubuyiselwa imali yentela ngoba izindlu atholwe kungenziwa ikhishwe kanye kuphela futhi senzuzo yokwelashwa ingatholakala unyaka ngamunye. Imibhalo e Office Tax zazisebenzela ngonyaka odlule, bese izinyanga ezintathu noma ezine, i-akhawunti yakho ithola imali.
Kuyini into azovika? Ingqikithi nomqondo
Indlela ukungena izingane passport isampula ubudala: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye nezici
Kufute ubhale kanjani isikhalazo ukuze umshushisi?
Hero zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa Cherepanov Sergey Mihaylovich: Biography
Sesikhala lesizalo fibroids - isici yayo
UMaria Ermak, umka-Evgeny Plushenko: biography, isithombe
Mongrel izinja (mongrels futhi abayingxube): ukuqeqeshwa uhlamvu
Umlingisi uVladimir Belokurov: nempilo yakho, biography